Opinion | Nyaya huru yausina kuverenga - New York Times - TELES RELAY
HOME » mwe »Opinion | Nyaya huru yausina kuverenga - New York Times
Opinion | Nyaya huru yausina kuverenga - New York Times
Shamwari yangu David Bornstein inotaura kuti kunyanya kwemashoko eAmerica kunobva pane imwe nzira isina kururama yekuchinja. Iyi nyanzvi ndeyekuti: nyika ichavandudza apo ticharatidza kuti zvinhu zvakakanganisika. Zvakawanda zvezvatinoita mubhizimusi redu ndekufumura zvikanganiso, kugadzirisa matambudziko nekuona kukakavadzana.
Dambudziko nderokuti vanhu vanonzwa vasingabatsiri uye vakaora mwoyo. Vanhu vanodya zvakawanda zvemashoko ezvenzira iyi vanonyura mune ino inotyisa vortex - vanhu vakaparadzana vavasingazivi, vanotya ramangwana. Havana kuderedzwa kuti vaite, kwete zvakare.
Bornstein, uyo anonyora zveThe Times uye avo vakabatanidza Journalism Network Solutions, vanoti unofanirwa kuzarura matambudziko, asi iwe unodawo kutsanangura kuti nyaya idzi dzinotaurirwa sei. Kutsvaga kwekugadzirisa zvinetso zvinonakidza kudarika zvinetso zvavo pachavo.
Asi vazhinji vevamwe vedu havafananisi kugadzirisa kwekugara kwevanhu uye chivakwa chevanhu semashoko. Zvinoratidzika zvakanyanya kwazvo, uyewo "zvinoremekedzwa", zvechokwadi.
Izvi hazvina kunaka.
Ndakapedza gore rakapoteredza vanhu vaifukidza zvigaro zvevanhu uye vhiki ino, nezvevashandi vemunharaunda ye275 vakaungana kuWashington semusangano. akadana #WeaveThePeople yakarongeka sechikamu chePurojekiti yeWave ndakashanda paAspen Institute.
Vanhu vari pamusangano uyu ndevamwe vevanhu vanonyanya kutendeseka vandakambosangana navo. Charles Perry akaiswa mujeri kwemakore anenge makumi maviri uye zvino anounganidza nhengo dzemagariro kune hutano hweChicago. Dylan Head aiva mutongi weuto uyo akashanda muIraq, akatambura nePTSD uye akavaka zvivako muNew Orleans kune veterinarians. Sarah Adkins akauya kumba imwe Svondo ndokuwana kuti murume wake akanga auraya vana vake uye iye zvino akanga achishanda ma pharmacy uye aigara upenyu hunoshanda muAppalachian Ohio.
Pancho Argüelles inoshanda kuTexas, inoperekedza vashandi vakatambura nemutsipa wepelinha. kukuvara pabasa. Inobatsira kuwana mapepa, maguruvhiri uye zvimwe zvinhu zvichavabvumira kuti vararame mukuremekedzwa. Pancho inodzinga huchenjeri hukuru, inenge utsvene. Sezvo iye nevamwe vakataura nezvekukosha kwavo, pfungwa imwechete yakauya mupfungwa: Haisi nyaya sei? Sei tisingafukidzi vanhu ava vakawanda?
Pamisangano yakawanda, vatori vechikamu vanotungamira nehupenyu hwavo, asi pamusangano uyu, vanhu vanotungamirira nekurwadziwa.
Imwe nyanzvi yekutsvakurudza yakatsanangura kuti yaitambudzwa sei semucheche uye kuti izvi zvakaunza sei kuongororwa kwake pamusoro pokukura kwepfungwa kwevana. Mumwe mukadzi wokuSouth Carolina akataura nezvevaya vaaida vainge varasikirwa uye nguva yaakaedza kumutsa murume kuti adzike kubva bhiriji kuti azvireurura zvakare: kana iwe ukasvetuka, ini ndichamhanya zvakare. Mumwe murume akabvuma kuti munhu wose waaida ainge amusiya uye akararama nechinetso ichi achitenda kuti mudzimai wake aizomusiya zvakare. Mumhepo yakasikwa vhiki ino, akanzwa akasununguka kurega kuenda kune dambudziko iri.
Yakanga iri kuuraya mupfungwa. Vatsiki vanoziva nzira yekuzarura ukama nekunetseka uye nzira yekubatanidza uye kutora matanho. Chimiro chavo chikuru ndechekuti ivo vane maonero ehukama.
Yaiva rangano iyo yaibvumirwa kuva munhu akatsamwa mutema. Vamwe vatori vechiAfrica neAmerica vakanyatsotsvaga kutsamwa kwavo pakusaruramisira. Yakanga isinganzwisisiki uye ichipisa, asi kusuruvara kwakapfuura nepakati pezvipingamupinyi uye kwakaita kuti tiswedere pedyo.
Martha Welch, purofesa uye muongorori weColumbia, akasimbisa kuti hutano hwedu hunoenderana nekubatana nevamwe. Hatiiti kungotonga manzwiro isu pachedu. Tinobatanidza nevamwe uye tinoda kuramba tichikurukura nevamwe kuitira kuti tisazvikanganise isu pachedu.
Vatinhi vanove vane hanya zvikuru nemamiriro ekufunga anogona kuumba kana kushamwaridzana hukama: vanhu vanogona kunzwa sei kana zvisingatombobudiriri, mamiriro ehupenyu muimba; kuti mazwi akaita sei "kururamisira kwevanhu" uye "bhaibheri" inogona kuva yakanaka kana yakaipa zvichienderana neuriri kutaura naye, uye chii chinokanganisa apo vanhu vanokukumbira kushandisa mazwi sezvavanoda, pane bvunza: iwe unorevei neshoko iri?
Paiva nezvakawanda zvekucherechedza zvakanyanya pamusoro pekuvaka nharaunda: "Ukama hunochinja pahutyo hwekutenda. Kuchinja kwehutano kunofamba nekukurumidza kwehukama. "Vavakidzani ndivo vanhu vatinoshandisa muupenyu. "Handisi kupedza matambudziko evanhu; Ndinovabvumira kuti vaende. Ndinoremekedza chakavanzika chekuporesa. "Tiri kuedza kuita chimwe chinhu chisati chaitika kare. Tiri kuedza kusika nyika yekutanga yenyika dzakawanda dzezvematongerwo enyika. "
Alexis de Tocqueville akasimbisa kuti hukama hwehukama hwakanga huri hukuru hwehupenyu hweAmerica. Asi mune zvenhau, isu tinovanza izvi. Tinonyatsovhara avo vanonyanya kukosha ekuchinja kwevanhu. Vanhu ava havana kunaka. Izvo zvakasvibirira, zvakatendeseka uye dzimwe nguva zvinotyisa.
Takawana sei pane zvataiva navo kuti takashandisa 90% yehuwandu hwe10% yehupenyu hwedu hunoita hutano uye 10% yeHNUMX% kugoverwa kwehupenyu hwedu hunotungamirirwa nehukama hwedu, mharaunda uye nzvimbo dzatinogara zuva rega rega?
CAMEROON-RUMOR: Jean Baptiste Bokam haasi kumhanya
Cameroon-Dambudziko reAnglophone: Pedyo ne30 "Amba Boys" vakaisa maoko muKumba